राती १२ बजे देखिए अर्जुन-मलाईका, सामाजिक सञ्जालमा गाली, बाबु पनि असन्तुस्ट (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
राती १२ बजे देखिए अर्जुन-मलाईका, सामाजिक सञ्जालमा गाली, बाबु पनि असन्तुस्ट (भिडियो)
एजेन्सी । अर्जुन कपुर र आइटम गर्ल मलाइका अरोराको सम्बन्धले निकै चर्चा पाएको छ । छोरा अर्जुनले आफूभन्दा १२ वर्ष जेठी मलाईकासँग लगनगाँठो कस्ने तयारी गरेपछि अर्जुनका बाबु बोनी कपुर असन्तुस्ट भएको समाचारहरुमा जनाइएको छ । बोनी कपुर सलमान खानसँग सम्बन्ध खराब हुने डरमा रहेको समेत बताइएको छ ।
मंगलबार फेरि यो जोडी मुम्बईको एक होटलमा स्पट भएको छ । समाचारअनुसार उनीहरुले सो होटलमा डिनरका लागि गएका थिए । डिरनबाट फर्किँदा उनीहरु क्यामेरा अगाडी परे । क्यामेरा देखेपछि अर्जुन कपुर मलाइकालाई लुकाउने प्रयासमासमेत लागेको भिडियोमा देखिएको छ ।
अर्जुन कपुर बलिउडका प्रोड्यूशर बोनी कपुरका छोरा हुन् । उनकी आमालाई छोडेर बोनीले श्रीदेवीसँग बिहे गरेका थिए । यसै कारण अर्जुन र श्रीदेवीबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध भएन । तर, श्रीदेवीको मृत्युपछि भने अर्जनु आफ्नी बहिनीहरु श्रीदेवीका छोरीहरुका साथ पनि देखिन्छन् ।
जहाँ अर्जुन अविवाहित युवक हुन् भने मलाईका डिभोर्सी तथा छोराकी आमा हु्न् । मलाईका सलमान खानका भाई अरबाज खानकी श्रीमती थिइन् । यो जोडीबीच गत वर्ष डिभोर्स भएको थियो । डिभोर्सको कारण पनि अर्जुन कपुरलाई मानिएको छ ।